Ahụmahụ ụfọdụ na mgbochi na njikwa COVID-19 | Ngwongwo Shoufan
Ugbu a Corona-virus na-agbasa n'ụwa niile. N'oge na-adịbeghị anya anyị na-enweta ọtụtụ akụkọ sitere n'aka ndị ahịa banyere ọnọdụ nke mba ha. Anyị maara ụfọdụ n'ime gị na-echegbu onwe gị banyere nje ahụ.
N'oge gara aga, anyị nwetara otu ihe ị na-ahụ ugbu a. Anyị chọrọ ịkọrọ gị ahụmịhe gị gbasara otu anyị si agafe oge siri ike. Olileanya na a ga-eme ụfọdụ enyemaka.
Site na ọnụ ọgụgụ data, nje ahụ abụghị ihe jọgburu onwe ya, dịka flue nke mere mgbe mgbe. Ma mgbasa nke corona-virus siri ike. N'oge ọrịa a, a gwara anyị nọrọ n'ụlọ ma ghara ịpụ. Maka na ọ bụrụ na emetụta ọtụtụ mmadụ n’otu oge, enweghị akwa zuru ezu na ndị dọkịta n’ụlọ ọgwụ. Otutu mmadu tufuru ndu ha nihi na enweghi ike igwọta ha n’oge kacha elu.
N'otu oge ahụ, mgbe ịchọta ndị emetụtara, ndị ọ zutere ma kpọtụrụ tupu a ga-achọpụta ma rịọ ka ewepụ ha iche ụbọchị iri na anọ, ma ọ bụrụ na enweghị ihe mgbaàmà metụtara nje ahụ, nke ahụ pụtara na ha nwere nchekwa.
Ọ bụrụ na emetụta ha ma ọ bụghị nke dị njọ, ha nwere ike iji ọgwụ ọdịnala ma ọ bụ ọgwụ si China n'ụlọ ọgwụ, nọrọ n'ime ụlọ akpọchiri iji gbakee. Ọ bụrụ na ọ dịghị njọ, ọtụtụ nwere ike ịgbake n'oge a.
Nọgide na-enwe ezi ọnọdụ, mekwuo mgbatị ahụ ma nọrọ n'ụlọ.
Ọ bụrụ na anyị ga-apụ n'èzí, ihe nkpuchi dị ezigbo mkpa. Ma mgbe ị laghachiri n'ụlọ, ọ dị mkpa ị disụ mmanya na-egbu egbu na 75% mmanya. N'ụzọ dị otú a, ohere ị bute ọrịa ga-adị ntakịrị
Ọ bụ ezigbo oge iji soro ndị ezinụlọ anyị nọrịa oge. Ebe ọ bụ na ọrụ na-ewe anyị oge dị ukwuu. N'otu oge ahụ, enwere oge maka ịgụ na ịmụ ihe ndị masịrị gị. Findchọta ụfọdụ ihe ị ga-eme ga-eme ka anyị nwee ọfụma.
Daalụ maka ngọzi niile nke ndị ahịa na ndị enyi anyị.
N'oge ihe isi ike, anyị na-enweta ọtụtụ enyemaka site na mba gị.
anyị ji ya kpọrọ ihe n’ezie.
Ugbu a, anyị ga-agọzi unu niile ma anyị ji n'aka na ọrịa ahụ ga-agafe n'oge na-adịghị anya. Mba anyị ga-enyere ma kesaa ahụmịhe niile. Biko echegbula, anyị bụ ọnụ dịka nnukwu ezinụlọ n’otu ụwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka ọ bụla, biko mee ka anyị mara.
Foto Site na China kwa ụbọchị